Indawo: Ikhaya » Ukuthumela » Airlines » I-New Northern Pacific Airways izoba nokubukeka kwase-Alaska
Idizayini emisha ikhethwe ngokucophelela ukuze ibonise ubuhle bemvelo bogwadule lwase-Alaska.
NgoJanuwari 18, 2022, I-Northern Pacific Airways yethule idizayini entsha yendiza endizeni yokuqala ezivakashini ezithamele umcimbi wokwethula e-San Bernardino, e-California, ku-Certified Aviation Services LLC (CAS.) hangar. I-Certified Aviation Services LLC iyi-MRO ebhekele ukwenza umdwebo welivery.
Idizayini emisha ikhethwe ngokucophelela ukuze ibonise ubuhle bemvelo bogwadule lwase-Alaska. Imibala emnyama emangalisayo namathoni athambile ampunga afanekisela indawo enezintaba, iqhwa, neqhwa. Idizayini ye-livery ifaka phakathi i-letterform ethi “N” ehlala ngemuva kwelogo ye-Northern Pacific. I-windshield ifaka impatho yokufihla ubuso enesibindi, emnyama enezela ukukhanga okuhlukile. Izimpiko zendiza ziyavela ngokuqhuma okuluhlaza okuluhlaza, okuhambisana nokungathathi hlangothi ukumela i-Northern Lights emangalisayo. Ukuqedela okuvelayo sekukonke, umsila ubamba i-motif yomugqa ogqamile nenhle osonta ngobukhazikhazi bemvelo, obuhlanganiswe nomsila odonsa amehlo we-jet-black.
"Umklamo we-livery uthwebula ngokucophelela uhlobo lwe-Northern Pacific kanye nothando lwethu ngekhaya lethu lase-Alaskan," kuchaza uRob McKinney, oyi-CEO ye I-Northern Pacific Airways. “Umklamo unanela izindinganiso zenkampani yethu yezindiza—inkonzo yamakhasimende ephakeme, umbono ohlonishwayo, kanye neqhinga lomzila eliklanyelwe ukuxhuma abagibeli ukusuka empumalanga kuya entshonalanga.”
Indiza ependiwe i-a Boeing 757-200 [inombolo yomsila N627NP]. Okokuqala ku I-Northern Pacific Airways' imikhumbi izohambisana nezinhlobo zezindiza ezifanayo.
Umongameli wasePeru ukhansela i-oda lakhe lokuvala i-Lima